VaZuma Votungamirira ANC kweMamwe Makore Mashanu
Zvita 18, 2012
Cyril Ramaphosa (L) Jacob Zuma (R)
WASHINGTON — Mutungamiri we African National Congress, ANC, VaJacob Zuma, vasarudzwa zvakare neChipiri kuti vatungamire bato ravo kwemamwe makore mashanu.
Kusarudzwa kwaVaZuma, avo vanova zvakare mutungamiri weSouth Africa, kunoreva kuti vanenge votarisirwa zvakare kumirira bato iri musarudzo dzemutungamiri wenyika muna 2014.
VaZuma vakasarudzwa semutungamiri wenyika muna 2009, mushure mekunge vasarudzwa kutungamira ANC muna 2007.
VaZuma, avo vave nemakore makumi manomwe, vanga vachikwikwidzwa nemutevedzeri wavo, VaKgalema Monthlante, musarudzo yapindwa nenhengo dze ANC dzinodarika zviuru zvina kuMangaung, Bloemfontein.
VaZuma vawana mavhoti anodarika zviuru zviviri nemazana mapfumbamwe, ukuwo VaMonthlante vakawana mavhoti ari pasi pechiuru.
Muzvinabhizinesi ane mukurumbira mu South Africa, VaCyril Ramaphosa, ndivo vasarudzwa kuva mutevedzeri waVaZuma. VaGwede Manthashe vadzorwa semunyori mukuru webato, vachitevedzerwa naMuzvare Jessie Duarte.
Sachigaro webato, Amai Baleka Mbete, vadzoserwa sasachigaro webato, ukuwo VaZweli Mkize ndivo ndivo varudzwa kuva mubati wehomwe zvbichitevera kukunda kwavaita VaPaul Mashatile vedunhu reGauteng.
Vanhu vakawanda muZimbabwe vange vakamirira kunzwa zviri kubva kuSouth Africa sezvo VaZuma, kuburikidza nenyika yavo, vari ivo mutongi gava panyaya yeZimbabwe, chidanho chavakatora kubva kune vaimbova mutungamiri wenyika iyi, VaThabo Mbeki.
VaMbeki ndivo vakave mutongi gava weZimbabwe kusvika panyoreranwa chibvumirano cheGlobal Political Agreement muna gunyana 2008.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo, uye vari maneja musangano reInstitute for a Democratic alternative Zimbabwe, VaJoy Mabenge, vanoti zvinofadza kuti VaZuma vabudirira sezvo zvichireva kuti vanoonderera mberi nekuyedza kugadzirisa nyaya yeZimbabwe.
Hurukuro naVaJoy Mabenge
VaDonald Trump Vosvika Gore Vachitungamira Nyika yeAmerica
MDC Alliance Yoita Musangano kuEpworth neMusi weSvondo
Vanotengesa muMigwagwa Vanoti Havasi Kuzovhunduka Masoja